पछिल्लो समय बढ्दै गएको प्रदूषणका कारण हुने आर्थिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले प्रदूषणका कारण मुलुकले बेहोनुपरेको आर्थिक नोक्सानीको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले वातावरण प्रदूषणका कारण सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएकाले उपचारका लागि खर्च बढ्दै गएको भन्दै समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । “प्रदूषणका कारण रोगीको संख्या बढिरहेको छ, यसले मुलुकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक भारको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ,” उनले भने, “पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको प्रदूषणको समस्या समाधानमा सबै पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।”
कार्यक्रमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रममा प्रदूषण नियन्त्रणको कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताए । “वातावरणीय प्रदूषणका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौं,” उनले भने, “तर सबै सम्बन्धित क्षेत्रको सहकार्यतामा मात्रै प्रदूषण नियन्त्रण सम्भव छ ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं उपत्यकालाई सफा र हरियाली बनाउन आफूहरू प्रयासरत रहेको बताए । “भिजिट नेपाल–२०२० लाई प्रथामिकता दिँदै अब क वर्षमा सडकमा फूलहरू फूलाउने छौं, खाली जग्गालाई पार्कमा विकसित गराउने योजना छ,” उनले भने ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानलाई निरन्तरता दिने बताए । वन तथा वतावरण मन्त्रालयले आगामी जेठ २२ गते हुने वातावरण दिवसको अवसरमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सडक स्तरोन्नती गर्न माग